HomeEnglandManchester City Oo Soo Koobtay Faraqii Dhibcaha Chelsea
Manchester City ayaa rikoodh dhigtay ah guushii ugu weynayd ee horyaalka Premier League ay gaadho xili ciyaareedkan kadib markii ay ka takhalustay Newcastle kuna soo koobtay shan dhibcihii ay Chelsea hogaanka horyaalka ku haysay.
David Silva ayaa laba gool oo daran doori ah is raaciyey kuwaas oo u saamaxay kooxda horyaalkii u dambeeyey haysata inay ka faa’iidaysato fursadii Burnley ee barbar dhaca ciyaartii Stamford Bridge.
Iyadoo uu ka dhex muuqdo Yaya Toure oo ka soo noqday ciyaarihii koobka Afrika, kaydkana uu ku bilowday weeraryahanka ay imika uun siisatay £25m ee Wilfried Bony , City waxay ku bilowday ciyaarta dardar iyo degdeg aan lagu arkin in dhawayd.
Sergio Aguero ayaa ugu horeynba gool rigoodhe ah ku aftaxay bilowgii ciyaartaba, waxaana mid labaad raaciyey Samir Nasri ka hor intii aanu gool saddexaad ku soo afjarin Edin Dzeko qaybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda New Castle ayaa awood isu soo yeeshay qaybtii labaad laakiin hadana waxaa ka nixiyey labadii gool ee degdega ahaa ee uu daqiiqadaha gudohood kaga xareeyey laacibka khadka dhexe ee reer Spain David Silva daqiiqadihii 50 aad iyo 52 aad ee qaybta dambe.
5-0 ayayna City ku dirtay New Castle United oo aan la garanayn wax si ka ahaa , waxaanay 5 dhibcood soo daba fadhiisanaysaa Chelsea oo iyadu barbaro 1-1 ah Stamford Bridge kula gashay naadiga Burnley.
Malaysia 1 – 1 Hong Kong – Full Highlights
Southampton Oo Xidhiidhka FA U Gudbinaysa Dacwad Ka Dhan Ah Liverpool